कुनै उपकरण बिना व्यायाम कसरी गर्ने - व्यक्तिगत विकास क्याफे
कुनै उपकरण बिना व्यायाम कसरी गर्ने
पोस्ट व्यवस्थापक | Mar 7, 2017 | स्वास्थ्य र कल्याण, तन्दुरुस्ती |0|
1 कुनै उपकरण बिना व्यायाम कसरी गर्ने
1.1 म के गर्न सक्छु व्यायाम?
1.1.1 के त्यहाँ छिटो र सजिलो व्यायाम छ जुन म उपकरण बिना गर्न सक्छु?
यदि तपाईंलाई भनिएको छ कि तपाईंलाई जिममा जानु आवश्यक छ फिट हुनको लागि तपाईंलाई गलत जानकारी दिइयो। जिम व्यायाम गर्न को लागी राम्रो ठाउँ हो, तपाईं सजिलैसँग आफ्नो घर मा कल्पना को लागी उपकरण को आवश्यकता बिना बाहिर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको यात्रालाई बचाउँदछ, जिम ब्याग प्याक गर्न आवश्यक छ र तपाईंलाई सुविधाजनक समयमा कसरतमा लचिलोपन प्रदान गर्दछ।
म के गर्न सक्छु व्यायाम?
व्यायाम को सब भन्दा सजिलो तरीका तपाई घर बाट गर्न सक्नुहुन्छ रनको लागि जानु हो। यदि तपाईं चालूको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईं छिटो हिँड्न शुरू गर्न सक्नुहुनेछ र जोगि and र हिड्नेको वैकल्पिक अवधिहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई अधिक अनुभवी हुनुहुन्छ भने तपाई अन्तराल प्रशिक्षण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाई रनको दौडान छोटो अवधिको लागि सामान्य भन्दा छिटो दगुर्नुहुन्छ। यसले तपाईंको चयापचयलाई बढावा दिंदा सहनशीलता निर्माण गर्दछ।
यदि तपाईं घर भित्र बस्न रोज्नुहुन्छ भने, तपाईं सजिलैसँग एक कसरत सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई जिमको जस्तै परिणाम दिनेछ।
के त्यहाँ छिटो र सजिलो व्यायाम छ जुन म उपकरण बिना गर्न सक्छु?
घरमा प्रदर्शन गर्नको लागि सजिलो व्यायामहरू ती हुन् जसलाई केवल तपाईंको शरीरको वजन चाहिन्छ। तपाईंको खुट्टाहरू टोन गर्न स्क्वाट्स र लन्जहरू प्रयास गर्नुहोस्, तपाईंको शरीरको माथिल्लो भागलाई काम गर्नको लागि प्रेस-अपहरू र तपाईंको कोर बल सुधार गर्नका लागि। तपाईं आफ्नो एब्स लक्षित गर्न सिट-अपहरू र साइकल क्रुन्चहरू पनि थप्न सक्नुहुनेछ।
एचआईआईटी (उच्च-तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण) पछिल्ला केही बर्षहरूमा लोकप्रियतामा बढेको छ। यो जहाँ तपाइँ छोटो अवधिको लागि अधिकतम तीव्रतामा व्यायाम गर्नुहुन्छ, छोटो विश्रामको पछि।
HIIT प्रशिक्षणको लागि राम्रोसँग काम गर्ने व्यायामहरूमा उच्च घुँडा, स्टार जम्पहरू, प्रेस-अपहरू र पहाड आरोहीहरू सामेल छन्। 30 सेकेन्ड व्यायाम गरेर 30 सेकेन्डको विश्राम गरेर प्रयास गर्नुहोस्। तीनदेखि पाँच पटक दोहोर्याउनुहोस् र तपाईंले यो महसुस गरिरहनु पर्छ। तपाईंको मेटाबोलिज्म पनि दिनभरि आगोमा रहनेछ।
सुधार्न कोसिस गर्नुहोस्
यदि तपाइँ आफ्नो तालिकामा प्रतिरोधको एक ठूलो थप्न चाहानुहुन्छ भने, प्रेरणाको लागि वरिपरि हेर्नुहोस्। तपाई आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि कुन आइटमले तौलको साथ काम गर्छ। मेरो मनपर्ने केहि पुस्तकहरु, टिन क्यान, र पानी बोतलहरु हुन्। कुर्सिहरू ट्राइसेप डिपहरू वा इनक्लाइन पुश अपको लागि उत्कृष्ट हुन्, जबकि तकियाले तपाईंको पछाडि वा घाँटीमा टेर्स पुर्‍याउन सक्दछ जब भुईमा आधारित व्यायाम गरिरहन्छ।
जानुहोस्, सिमको एक टिन समात्नुहोस् र एक घर कसरत एक पटक जान दिनुहोस्।
पछिल्लोश्रेणी द्वारा शीर्ष रोजगार खोज वेबसाइटहरू
अर्कोएचआईआईटी प्रशिक्षण के हो (उच्च-तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण)?